Banyere Anyị - Guangxi Foxi Jewelry Co., Ltd.
cuff ọla ntị
mgbaaka, bangle, nkwonkwo ụkwụ
E guzobere ọla FOXI na 2002 na ogo dị elu, ọnụahịa dị ọnụ ala, oge dị mkpirikpi, ọrụ ndị ahịa ka mma na-ekwusi ike karịa afọ 20 gara aga ma ga-emelite kwa ụbọchị n'ọdịnihu.
Ngwaahịa ahụ na-agụnye agbụ ọla edo, ihe mkpuchi, mgbaaka, ọla aka na ọla mma mgbe ihe mkpuchi hip hop bụ uru kachasị. Anyị na-enyere aka na ụdị 10 nnukwu hip hop ụdị gbasaa ka ha bụrụ ndị na-ere ere 10. Ihe kacha mma na-eme ka ndị ahịa ghara ime mkpesa na o kwere omume ma ọ dịkarịa ala afọ 2.
Anyị nwekwara ndị siri ike n'azụ. Ike imepụta nwere ike ịbụ ụdọ 100000pcs kwa ọnwa yana a ga-enyocha mpempe akwụkwọ ọ bụla na akara ngosi tupu ebufee ya. Onye mmebe anyị ga-enye aka imepụta omenala yana naanị foto na ihe achọrọ. Egbula oge gwa ihe ị chọrọ pls!
1. ọlaedo plating. Agba ọla edo anyị nwere ike ịdịru ihe karịrị afọ 2 n’agwaghị agba.
2. Ndụ akwụkwọ ikike. Nwere ike ịlaghachikwute anyị oge ọ bụla ị nwere nsogbu ọ bụla nke iwu gị.
3. Omenala Ọrụ. Naanị zitere anyị eserese gị na echiche gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịme usoro nke gị.
4. Nnukwu ikike mmepụta. N'inwe ulo oru 2, ihe kariri ndi oru 200 na ngwa ndi di elu, anyi nwere ike ikwe nkwa mmeputa ihe na obere oge nnyefe.Anyị nwere ndị otu ọmarịcha nke anyị, tupu usoro ahịa onye ọ bụla ga-agbaso usoro ndị ahịa na-achọ ihe osise, CAD nsụgharị eserese, imewe ka afọ ojuju ndị ahịa, hụ na mgbe ị na-ere ahịa ka ị ghara inwe nchegbu.Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị ugbu a!
1,000-3,000 mita mita
Mba / Mpaghara orylọ Ọrụ
Adreesị 1: 180lọ 1801, 18 Ft, Guolong Fortune Center, Wuzhou City, Guangxi Zhuang Autonomous Region, China Mpaghara Zhuang kwurula, China
Mba nke Usoro Mmepụta
OEM Service Wepụta
Kwa Afọ mmepụta Uru
US $ 10 Nde - US $ 50 Nde
Dị & NOdị
Handstick Size Size
Agba Kaadị Kaadị
Glass Sanghai, N / A
Isi Ahịa & Ngwaahịa (s)
Mgbakọ niile (%)
Main Ngwaahịa (s)
Ebe Ọwụwa Anyanwụ Europe
Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia
Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia
Tennis Chain Olu, Olu ọlaọcha, Butterfly Ihe eji eme ihe, Chain Chains, Butterfly Tenis Chain, Ahụ ọla,